နျူကလိယ၌အင်ကာဖလင်းအနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်သည်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော anhedonia (အခြေခံ) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်
စိတ်ဖိစီးမှု။ 2014 ဇန်နဝါရီ; 17 (1): 88-96 ။ Doi: 10.3109 / 10253890.2013.850669 ။ EPub 2013 အောက်တိုဘာ 31 ။
Poulin JF1, Laforest S က, Drolet, G.
ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ရွေ့ကျယ်ကျယ်တစ်ဦးကထပ်ခါတလဲလဲဖိအားဖို့ neuroendocrine တုံ့ပြန်မှုလေ့ကိုလေ့လာရန်အသုံးပြုခဲ့ကြပေမယ့်ဒီအစိတ်ဖိစီးမှု regimen ၏အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များအကြီးအကျယ် uncharacterized ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ကြွက်များတွင်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း၏ 14 လက်ထက် မှစ. ရရှိလာတဲ့အမူအကျင့်ကိုပြောင်းလဲစုံစမ်း sucrose preference ကိုနှင့်ခြီးမွှောကျ-ပေါင်းဝင်္ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအောက်ပါလေးရက် (ထိုသို့ခြီးမွှောကျ-ပေါင်းဝင်္အတွက်တိုင်းတာကဲ့သို့) အထူးသဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏အဖွဲ့ခွဲအတွက်အလေးပေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက် sucrose preference ကိုတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းလေ့လာတွေ့ရှိပေမယ့်စိုးရိမ်စိတ်အပြုအမူတွေကိုမအပြောင်းအလဲတချို့။
ဤအနိမ့် sucrose preference ကိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကျနော်တို့နျူကလိယ accumbens အတွက် preproenkephalin mRNA ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတစ် downregulation လေ့လာသည်။ ထို့ပြင်ကျွန်တော်တစ်ဦးနှင့်တကွ, နျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက် enkephalin စကားရပ်နှင့် sucrose preference ကိုအကြားခိုင်မာသောဆက်စပ်မှုလေ့လာတွေ့ရှိ အောက်ပိုင်း sucrose preference ကိုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိ enkephalin စကားရပ်၏အနိမ့်အဆင့်အထိ။ စိတ်ဝင်စားစရာ, အ corticosterone တုံ့ပြန်မှုအရေအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်လိုငွေပြမှုမှအားနည်းချက် glucocorticoids ဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်မည်အကြောင်းတည်းအကြံပြုထားတဲ့, အနိမ့် sucrose preference ကိုလူဦးရေအတွက်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဖို့နှောင့်နှေးလေ့ဖော်ပြခဲ့တယ်။
ΔFosB၏ induction ကိုလည်းနျူကလိယအတွင်းလျှော့ချသည်အနိမ့်-sucrose preference ကိုလူဦးရေရဲ့ shell ကို accumbens နှင့်ဤကူးယူအချက် enkephalin အာရုံခံအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖြစ်ပါတယ်. အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤရလဒ်များနျူကလိယ accumbens အတွက် enkephalin တစ်ΔFosB-mediated downregulation နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်အခြေခံအံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ နောက်ထပ်စမ်းသပ်ချက်အဲဒီနှစျခုဖြစ်ရပ်အကြားကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့စစ်တမ်းအရအသက် ၁၃-၁၆ နှစ်အရွယ် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာဒီကာလအတွင်းမှာပိုပြီးညစ်ညမ်းကြည့်ကြတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ t.co/9UVhe33QfK
“ Xand အဝလွန်ရခြင်း၏အကြောင်းအရင်းမှာဗြိတိန်ရှိကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ t.co/jdHQP4ZKGD